Ụbọchị My Pet » Gịnị Women n'Ezie Chọrọ?
site David Ikebe
Gịnị Women n'Ezie Chọrọ?
emelitere ikpeazụ: Nov. 27 2020 | 5 min agụ
Ọ bụrụ na ị na-ajụ a nwaanyị ihe ọ chọrọ, ọ ga-aza site na ịnwa na-akọwa ihe ọ chọrọ na a nwoke. Ndien enye emekarị nwere nsogbu na-akọwa na. O nwere ike ọ bụghị na-amalite na-akọwa ihe ọ bụ ọ n'ezie kwesịrị.
Mgbe ị na-akpachara anya na-edebe ndị inyom nọ na mmekọrịta, ị na-ahụ na ụfọdụ mmekọrịta ndị ọzọ afọ ojuju na ihe ịga nke ọma karịa ndị ọzọ. N'ihi na ihe ịga nke ọma mmekọrịta, nwaanyị na-na-na ihe niile o kwesịrị. Na mmekọrịta na-adịghị imezu, otu ma ọ bụ karịa n'ime ihe ndị nwaanyị mkpa na-adịghị zutere.
Ọ Maara mgbe ihe oké mkpa-adịghị
Mgbe ị na-akpachara anya na-edebe ndị inyom na-n'èzí nke alụmdi na nwunye ha, ị na-ahụ na ha na-inweta nke ha na-efu na alụmdi na nwunye ha. Ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na nwoke na nwanyị bụ na-agwụ ike, ọ ga-enweta ihe na-akpali akpali n'anya. Ọ bụrụ na nwoke na nwanyị na alụmdi na nwunye bụ ihe dị mma, ma ọ na-eche na ọ na-adịghị na-emeso ya na nkwanye ùgwù, ọ ga-a onye na-emeso ya na-akwanyere. Mgbe ụmụ nwanyị na-aga ná mpụga nke alụmdi na nwunye ha, ha na-achọ ka nwere otu onye ma ọ bụ karịa nke ha mkpa ha zutere. N'ihi na ụfọdụ ụmụ nwaanyị, ma ọ bụrụ na ọ na-ewe abụọ dị iche iche ndị mmadụ iji nweta ya nile mkpa zutere, ọ ga-eme ya.
Na-akpali mmasị, ọtụtụ ikpe, ndị inyom na-achọ na-aga ná mpụga nke alụmdi na nwunye ha. Ha maara na ha bụ ndị obi ụtọ. Ha ghọrọ susceptible ọganihu site ndị ikom ndị ọzọ na mgbe ahụ họọrọ iji na-aga na ya.
N'ihi na ọtụtụ ndị inyom, ma ọ bụrụ na ọ na-adịghị na-niile ya mkpa zutere, ọ ga-kpam kpam-ahapụ nwoke na anya n'ihi na a onye nwere ike mezuo ya. Ma ọ maghị na ọ bụ n'ihi na ọ na-agaghị na-ya nile mkpa zutere, ọ nanị maara ihe banyere mmekọrịta ọ na-anaghị amasị.
Women nwere ike ghara ịma ya, na ọtụtụ n'ime ha na-emekwa ike ikpoputa ya, ma ndị inyom mkpa anọ ihe iji mezuo.
E nwere ihe anọ Mkpa A Nwanyi Mkpa
Mbụ, o kwesịrị iche na ekele maka pụrụ iche mmadụ na ọ bụ. Ọ kwesịrị ka pụrụ iche, n'adịghị ọ bụla ọzọ nwaanyị. Ma o kwesịrị ịmara na ya nwoke na-akwado ya na ya na-agbalịsi.
Nke abụọ, o kwesịrị na-eche na miri-akpachi anya nke uche njikọ. Ọ kwesịrị ka nwere na nke mmetụta uche na-akpachi anya na ya nwoke. Ọ bụ a njikọ ọ na-ezisara nanị na ya.
Nke atọ, o kwesịrị na-eche dị ka a nwaanyị. O kwesịrị na-eche mara mma, sexy, na nwanyị. O kwesịrị na-enwe ihe ndị ahụ nile na-abịa na ịbụ nwanyi.
Ndien ke akpatre, o kwesịrị na-ekpo ọkụ omiiko mmekọahụ. Ọ kwesịrị ka a rafuru, rafuo, njakịrị, na afọ ojuju, n'elu na n'elu ọzọ. O kwesịrị na-enweta ihe ndị ọhụrụ, na ụzọ ọhụrụ, gụnyere fantasies na ọrụ. Ọ na-eme ya na-eche ndụ.
A nwanyị a na-kasị mezuru mgbe ọ bụ na nwoke na o nwere ihe niile na, mgbe ọ bụ na nwoke na ọ bụ wildly crazy banyere. Ma na-anaghị eme. Emekarị, otu ma ọ bụ karịa ihe na-efu.
Ihe atụ dị iche iche Men Na A nwanyị Life
Ka anyị lee anya na ndị dị iche iche ndị na-a nwaanyị anọwo ná ndụ ya. The dị iche iche ndị mmadụ zutere ụfọdụ nke mkpa, ma ọ bụghị ha niile.
The Bad Nwa
Ọmụmaatụ, ka na-niile ma ama kpochapụwo ọjọọ nwata. Ihe ọjọọ nwata na-enye ya na-akpali akpali mmekọahụ. Ma n'ihi na ọ bụ nnọọ oke, ọ na-eme ya na-eche sexy. Ma ọ bụ onwe etinye obi gị dum jerk onye Ndị aghụghọ na ya. Ọ dịghị eche ekele, ọ na eleghị anya bụ enweghị ike na-eche mmetụta uche ọ bụla njikọ. Ọ na-na-riri ya n'ihi na mmekọahụ bụ otú ahụ ihe ọma ọ na-adị nnọọ mmekọahụ. Ọ ga na-agbalị n'efu ka imeju ya, ma ọ bụ adịghị amị mkpụrụ. Na onye obi na-gbasaa, akpatre enye doo ya maka ezi. Dịkarịa ala ndị dị elu onwe ùgwù nwaanyị akpatre doo ya maka ezi.
Mgbe ahụ, e nwere ihe kpochapụwo wimp mma Ihọd. Ọ na-eme ya na-eche Kpọrọ, na ọ bụ ike imere onye obi ya n'ihe metụtara. O di nwute na ọ bụ ezie na, ọ bụ na-agwụ ike, ma ọ bụ ọ bụghị oke, n'ihi ya, ọ na-adịghị sexy na-adịghị tụgharịa na banyere mmekọahụ. Ọ ga-amasị ịlụ ya, n'ihi na ọ ga-zuru okè n'ihi na a na ezinụlọ, Ma n'ihi ihe ụfọdụ ọ na-egbu oge na njikọ aka. Ọ bụ n'ihi na ọ dịghị eme ka ya na-eche dị ka a mmekọahụ e kere eke.
The n'ụzọ mmetụta uche Adịghị Guy
The ezigbo o nwere ike ga-esi ezigbo mmekọrịta bụ mmetụta uche ọ dịghịzi adị Ihọd. Ọ bụghị a wimp, ọ na-a jerk. O nwere ike inwe oke na-enye ya ezigbo mmekọahụ. O nwere ike ịbụ a nwa amadi na-eme ka ya na-eche nnọọ ekele. Ma, e nwere otu ihe dị mkpa-efu. Ọ bụghị mmetụta uche dị. Ọ dịghị mgbe o na-ele n'ụzọ mmetụta uche ejikọrọ ya. Nke a bụ eleghị anya nnukwu mkpesa inyom nwere. Ọ hụrụ na ezigbo Ihọd n'ihe niile, ma m achọ ịma ya, ọ na-n'ụzọ mmetụta uche dị. Ọ na-agba mbọ na n'elu na n'elu ka ya na-emeghe ka ya, ma ọ dịtụghị mgbe itịbe. Women bụ mmetụta uche e kere eke, na ha mkpa, n'ihi ya, ọ emecha doo.
Nwoke nwere mmasị nwoke Enyi
E nwere ndị ikom ndị ọzọ ná ndụ ya. E nwere ihe ya nwoke nwere mmasị nwoke enyi. Ọ hụrụ nghọta si na ya n'ihi na ọ na-eme ya na-eche sexy o n'ezie na-eme ya na-enwe ekele maka. O nwere ọtụtụ na-ahụkarị ya, ma m achọ ịma ya, ọ bụ nwoke nwere mmasị nwoke, na otú bụghị otu nhọrọ.
The Omimi n'Anya
Ma e nwere bụ mgbe ụfọdụ omimi n'anya. N'ihi ọtụtụ ihe mere na ọ ga-mgbe mgbe na-ele ya kpọrọ ihe ọ bụla, ma m achọ ịma, mmekọahụ dị mma. Ozugbo ọ bụla ọnwa ole na ole, mgbe ọ na-gbụrụ na otú ihe na-aga n'ihi na ya, ọ ga-akpọ ya na-aga n'elu otu ihe, na otu ihe nanị. N'ihi na mmekọahụ. Ma mgbe ahụ, ọ na-enwe olileanya doo ọ ga-achọpụta na ezigbo nwoke.
Onye lụrụ nwaanyị na
Ndien ke akpatre, dị ka otu ikpeazụ atụ, e nwere bụ onye lụrụ nwaanyị na. Naanị onwe onye dị ala ùgwù inyom ekwe ka ha na-aghọ a ekaufọk, ma ọ bụ ndị ọzọ okwu, a nwaanyị bụ onye chọrọ ihe ọ nwere ike ghara inwe. Ọ na-enye ya na-akpali akpali mmekọahụ, ọ na-eme ya na-eche sexy, ha na-a miri emi nke mmetụta uche njikọ. Ma ọ ga-ahapụ nwunye ya. N'ihi ya, ọ na-adịghị pụrụ iche. Ma n'ihi na ọ bụ ala onwe ùgwù, ọ bụ nnọọ ike ka ya na-ahapụ.
Ma, ka na-azụ elu onwe ùgwù inyom.
Ọ bụrụ na naanị Ọ pụrụ ịbụ na ihe nile nke o Kwesịrị
Ya mere, ndị ahụ bụ ihe atụ nke ndị na ndụ ya. Ka i si hụ, otu ma ọ bụ karịa nke ya mkpa na-adịghị zutere na onye ọ bụla ka ihe atụ. Ma were ma ọ bụrụ na ọ pụrụ izute nwoke na-adị mfe zutere niile ya mkpa. A onye mere ya obi na-adị ekele. A onye kpaliworo a miri emi dị ike nke mmetụta uche ya n'ihe metụtara. A onye na-eme ya na-eche nwanyị na womanly na sexy. A nwoke na-enye ya na-ekpo ọkụ omiiko mmekọahụ. Ugbu a, na ga-abụ dị egwu.
Nke ahụ bụ nkà n'Anya. Ọ dị ike ma dị nwayọọ. Eme ihe n'eziokwu ma jiri nkà na. Oke ma n'ụzọ mmetụta uche. Bụrụkwa ma mgbanwe. Isetịpụ ihe mgbaru ọsọ ma n'amaghi. Chụpụrụ ma na-enye. Akara ererimbot ke ata ma echiche. Na-enye ya anụ iti mkpu orgasms.
Ọ bụ ụdị ihe inyom nrọ banyere.
Ọ na-a na-elekwasị anya m research nke ikpeazụ 15 afọ, na e akwukwo m akwụkwọ, “David Ikebe si nkà n'Anya Manual.” Ị pụrụ ịgụ banyere akwụkwọ na m website.
Nye inyom ịrịba ụtọ,
Top 5 US Cities maka Single Men
Olee otú Ịhụnanya nwere ike na-unu nke Nsogbu?
Nzuzo nke a Great Kiss